ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရားဖူးများအားအသုံးချကာ ရွှေကုန်ကူးသည့် ဘုရားဖူး company များရဲ့လုပ်ရပ် – ရှအေလငျး
ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရားဖူးများအားအသုံးချကာ ရွှေကုန်ကူးသည့် ဘုရားဖူး company များရဲ့လုပ်ရပ်
အိန္ဒိယမှာ ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဂါယာဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… ဗုဒ္ဓဂါယာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့အတွက် အထွဋ်အမြတ်ဆုံး ဖြစ်ရခြင်းက ထိုဒေသမှာ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ကို ရရှိပြီးတော့ မာရ်ငါးပါးကို အောင်မြင်ခဲ့သော အောင်မြေဖြစ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်… ထိုအရပ်ကို မြန်မာတို့က ဗောဓိမဏ္ဍ သို့မဟုတ် ဗောဓိမဏ္ဍိုင်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်…ဘုရားရှင် ဘုရားအဖြစ်ကို ရတော်မူပြီးနောကမှာ ထိုဒေသတဝိုက်မှာ ရှိတဲ့ ဌာနခုနစ်ဌာနမှာ တစ်ဌာနကို ခုနစ်ရက်စီ သတ္တသတ္တာဟ စံတော်မူခဲ့ပါတယ်…ထိုဌာနဟာ ဗုဒ္ဓဂါယာ၌ အဓိကဖူးမျှော်ဖွယ်ရာများတွင် ပါဝင်ကြပါတယ်…ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာတိုင်းဟာ ဗုဒ္ဓဂါယာကို သွားရောက်ဖူးမြော်ချင်ကြပြီးတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သွားရောက်ဖူးမြော်နေကြသူတွေလည်းမနည်းလှပါဘူး…
အဲဒီလို သွားရောက်ဖူးမြော်တဲ့အခါ ခရီးသွားကုမ္ပဏီကနေ ခရီးသွား Package တွေနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးတာတွေ ရှိပါတယ်…
ဒီလိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာ တချို့ကုမ္ပဏီက ရွှေကုန်ကူးတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်နေကြတယ်…မြန်မာနိုင်ငံက လေဆိပ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံလေဆိပ်တွေမှာ သတ်မှတ် ပမာဏထက် ရွှေထည်တွေ ပိုမိုဝတ်ဆင်လာသူတွေကို သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ရှိတဲ့ အကောက်ခွန်ဌာန က ဖမ်းမိတာကြောင့် အရေးယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဗုဒ္ဓ ဂါယာဘုရားဖူးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်မြင့်က ပြောပါတယ်….
ရွှေကုန်ကူးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေ သည့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေကို အရေးယူမယ်လို့ သူကပြောပါတယ်…နောက်ပြီး ဘုရားဖူးသွားမဲ့ သူတွေကိုလည်း သူကအခုလို သတိပေးထားပါတယ်…
‘‘နယ်တွေမှာ ပိုဆိုးတယ်…ဘုရားဖူးတွေကို ပြောချင်တာက ဈေးလျှော့ပေးမယ်၊ ရွှေထည် လေး ဝတ်ပေးပါဆိုရင် အဲဒီ ကုမ္ပဏီနဲ့ လုံးဝမသွားပါနဲ့… အရမ်းအန္တရာယ်များလို့ပါ.. အဖမ်းခံရပါ လိမ့်မယ်’’လို့ ဦးမောင်မောင်မြင့်က ဆိုပါတယ်…
တချို့ ကုမ္ပဏီတွေက ဘုရားဖူးတွေကို ဗုဒ္ဓဂါယာခရီးစဉ်အတွက် ကျပ် ၂ သိန်းလောက်အထိ ဈေးလျှော့ပေးပါတယ်…ပြီးတော့ ၂ ကျပ်ခွဲသားလောက်ရှိတဲ့ လက်ကောက် ၂ ကွင်းစီကို ဘယ်ညာဝတ်ခိုင်းပါတယ်…အကြောင်းပြချက်ကတော့ ရွှေစေတီတည်နေလို့ ဆရာတော်က ဝတ်ခိုင်းတာပါဆိုပြီး ခရီးသွားတွေကို ညာပါတယ်…ခရီးသွားတွေကလည်း သဘောရိုးနဲ့ ဝတ်ပြီး သယ်ပေးတဲ့အခါ အိန္ဒိယလေဆိပ်ရောက်တဲ့အခါမှာ သတ်မှတ်ပမာဏထက်ပိုသယ်လာတာကြောင့်ဆိုပြီး အရေးယူခြင်းခံရပါတော့တယ်…
အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာက ရွှေတစ်ကျပ်သားကို ကျပ်တစ်သိန်း လောက် ဈေးကွာပြီး အိန္ဒိယမှာ ရောင်းရင် ပိုမြတ်တာကြောင့် ခုလို တရားမဝင်ရွှေသယ်မှုတွေ ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်…
တချို့ ဘုရားဖူးကုမ္ပဏီအမည်ခံပြီး ခရီးသွားတွေကို ခရီးစဉ်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၅၀ လောက်လျှော့ပေး…ပြီးတော့ ရွှေဝတ်ခိုင်းပြီး တစ်ကျပ်သားကို ဒေါ်လာ ၇၀ လောက်အမြတ်ရတာကြောင့် မှောင်ခိုလုပ်နေကြတယ်လို့ နာမည်အပျက်မခံဘဲ အဲဒီလို မှောင်ခိုအလုပ်ကို လုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြေညာထားတဲ့ ဘုရားဖူးပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Facebook ပေါ်က ရေးသားချက်တွေအရ သိရပါတယ်…
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေမှာ ခရီးသွားတွေကို ရွှေထည်အလေး ချိန် ၃၀ ဂရမ်အထိသာ သယ်ယူဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုတာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကတော့ လေဆိပ်မှာ ခရီးသွားတေံကို ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုသာ သယ်ယူဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုသယ်လို့ အိန္ဒိယလေဆိပ်မှာ အဖမ်းခံရတာတွေရှိလာပြီးတော့ မြန်မာဘုရားဖူးဆိုတာနဲ့ အရမ်းစစ်နေပြီလို့ သိရပါတယ်…
အဲဒါကြောင့် ဘုရားဖူးခရီးသွားများကို ရွှေထည်ဝတ်ဆင်စေပြီးတော့ တရား မဝင် ရွှေကုန်ကူးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘုရားဖူးခရီးသွားရာသီမှာ စစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေပြီလို့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေပြီလို့ ဦးမောင်မောင်မြင့်က ပြောပါတယ်…
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဂါယာကို ဘုရားဖူးသွားမယ်ဆိုရင် မိဘပြည်သူတို့လည်း မိမိကိုယ်ပိုင်ရွှေတွေကို ဥပဒေမသိလို့ သတ်မှတ်ပမာဏထက် ရိုးရိုးသားသားပိုဝတ်မိတာဖြစ်စေ…ဘုရားဖူး ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေက အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ဈေးလျှော့ပေးပြီး ရွှေတွေဝတ်ခိုင်းတာကို မသိလို့ ဝတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်စေ မလုပ်မိကြဖို့ သတိထားကြဖို့ အသိပေးလိုပါတယ်နော်…
Source : 7Day Daily and A Tour Company’s Post
အိန်ဒိယမှာ ရှိတဲ့ ဗုဒ်ဓဂါယာဆိုတာ ဗုဒ်ဓဘာသာမွနျမာလူမြိုးတှအေတှကျ အထှဋျအမွတျထားတဲ့ နယျမွတေဈခုဖွဈပါတယျ… ဗုဒ်ဓဂါယာဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအပေါငျးတို့အတှကျ အထှဋျအမွတျဆုံး ဖွဈရခွငျးက ထိုဒသေမှာ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ သဗ်ဗညုတရှဉောဏျတျောကို ရရှိပွီးတော့ မာရျငါးပါးကို အောငျမွငျခဲ့သော အောငျမွဖွေဈတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ… ထိုအရပျကို မွနျမာတို့က ဗောဓိမဏ်ဍ သို့မဟုတျ ဗောဓိမဏ်ဍိုငျဟု ချေါဝျေါကွပါတယျ…ဘုရားရှငျ ဘုရားအဖွဈကို ရတျောမူပွီးနောကမှာ ထိုဒသေတဝိုကျမှာ ရှိတဲ့ ဌာနခုနဈဌာနမှာ တဈဌာနကို ခုနဈရကျစီ သတ်တသတ်တာဟ စံတျောမူခဲ့ပါတယျ…ထိုဌာနဟာ ဗုဒ်ဓဂါယာ၌ အဓိကဖူးမြှျောဖှယျရာမြားတှငျ ပါဝငျကွပါတယျ…ဒါကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမွနျမာတိုငျးဟာ ဗုဒ်ဓဂါယာကို သှားရောကျဖူးမွျောခငျြကွပွီးတော့ နှဈစဉျနှဈတိုငျး သှားရောကျဖူးမွျောနကွေသူတှလေညျးမနညျးလှပါဘူး…
အဲဒီလို သှားရောကျဖူးမွျောတဲ့အခါ ခရီးသှားကုမ်ပဏီကနေ ခရီးသှား Package တှနေဲ့ ပို့ဆောငျပေးတာတှေ ရှိပါတယျ…
ဒီလိုပို့ဆောငျတဲ့နရောမှာ တခြို့ကုမ်ပဏီက ရှကေုနျကူးတဲ့ လုပျငနျးလုပျနကွေတယျ…မွနျမာနိုငျငံက လဆေိပျနဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံလဆေိပျတှမှော သတျမှတျ ပမာဏထကျ ရှထေညျတှေ ပိုမိုဝတျဆငျလာသူတှကေို သကျဆိုငျရာလဆေိပျမှာ ရှိတဲ့ အကောကျခှနျဌာန က ဖမျးမိတာကွောငျ့ အရေးယူဖို့ ပွငျဆငျနတေယျလို့ ဗုဒ်ဓ ဂါယာဘုရားဖူးလုပျငနျးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးမောငျမောငျမွငျ့က ပွောပါတယျ….
ရှကေုနျကူးလုပျငနျး လုပျကိုငျနေ သညျ့ ခရီးသှားကုမ်ပဏီတှကေို အရေးယူမယျလို့ သူကပွောပါတယျ…နောကျပွီး ဘုရားဖူးသှားမဲ့ သူတှကေိုလညျး သူကအခုလို သတိပေးထားပါတယျ…
‘‘နယျတှမှော ပိုဆိုးတယျ…ဘုရားဖူးတှကေို ပွောခငျြတာက ဈေးလြှော့ပေးမယျ၊ ရှထေညျ လေး ဝတျပေးပါဆိုရငျ အဲဒီ ကုမ်ပဏီနဲ့ လုံးဝမသှားပါနဲ့… အရမျးအန်တရာယျမြားလို့ပါ.. အဖမျးခံရပါ လိမျ့မယျ’’လို့ ဦးမောငျမောငျမွငျ့က ဆိုပါတယျ…
တခြို့ ကုမ်ပဏီတှကေ ဘုရားဖူးတှကေို ဗုဒ်ဓဂါယာခရီးစဉျအတှကျ ကပျြ ၂ သိနျးလောကျအထိ ဈေးလြှော့ပေးပါတယျ…ပွီးတော့ ၂ ကပျြခှဲသားလောကျရှိတဲ့ လကျကောကျ ၂ ကှငျးစီကို ဘယျညာဝတျခိုငျးပါတယျ…အကွောငျးပွခကျြကတော့ ရှစေတေီတညျနလေို့ ဆရာတျောက ဝတျခိုငျးတာပါဆိုပွီး ခရီးသှားတှကေို ညာပါတယျ…ခရီးသှားတှကေလညျး သဘောရိုးနဲ့ ဝတျပွီး သယျပေးတဲ့အခါ အိန်ဒိယလဆေိပျရောကျတဲ့အခါမှာ သတျမှတျပမာဏထကျပိုသယျလာတာကွောငျ့ဆိုပွီး အရေးယူခွငျးခံရပါတော့တယျ…
အိန်ဒိယနဲ့ မွနျမာက ရှတေဈကပျြသားကို ကပျြတဈသိနျး လောကျ ဈေးကှာပွီး အိန်ဒိယမှာ ရောငျးရငျ ပိုမွတျတာကွောငျ့ ခုလို တရားမဝငျရှသေယျမှုတှေ ရှိလာတာဖွဈပါတယျ…
တခြို့ ဘုရားဖူးကုမ်ပဏီအမညျခံပွီး ခရီးသှားတှကေို ခရီးစဉျအတှကျ ဒျေါလာ ၁၅၀ လောကျလြှော့ပေး…ပွီးတော့ ရှဝေတျခိုငျးပွီး တဈကပျြသားကို ဒျေါလာ ၇၀ လောကျအမွတျရတာကွောငျ့ မှောငျခိုလုပျနကွေတယျလို့ နာမညျအပကျြမခံဘဲ အဲဒီလို မှောငျခိုအလုပျကို လုံးဝမလုပျဘူးဆိုပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးကွညောထားတဲ့ ဘုရားဖူးပို့ဆောငျရေး ကုမ်ပဏီတဈခုရဲ့ Facebook ပျေါက ရေးသားခကျြတှအေရ သိရပါတယျ…
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ ဥပဒမှော ခရီးသှားတှကေို ရှထေညျအလေး ခြိနျ ၃၀ ဂရမျအထိသာ သယျယူဝတျဆငျခှငျ့ပွုတာ ဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံကတော့ လဆေိပျမှာ ခရီးသှားတေံကို ကပျြသိနျး ၁၀၀ အောကျတနျဖိုးရှိတဲ့ လကျဝတျရတနာတှကေိုသာ သယျယူဝတျဆငျခှငျ့ပွုထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ…
သတျမှတျပမာဏထကျ ပိုသယျလို့ အိန်ဒိယလဆေိပျမှာ အဖမျးခံရတာတှရှေိလာပွီးတော့ မွနျမာဘုရားဖူးဆိုတာနဲ့ အရမျးစဈနပွေီလို့ သိရပါတယျ…
အဲဒါကွောငျ့ ဘုရားဖူးခရီးသှားမြားကို ရှထေညျဝတျဆငျစပွေီးတော့ တရား မဝငျ ရှကေုနျကူးနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေို ၂၀၁၉-၂၀ ဘုရားဖူးခရီးသှားရာသီမှာ စဈဆေးအရေးယူနိုငျဖို့ သကျဆိုငျရာဝနျကွီးဌာန တှနေဲ့ ဆှေးနှေးနပွေီလို့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျနပွေီလို့ ဦးမောငျမောငျမွငျ့က ပွောပါတယျ…
ဒါကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဂါယာကို ဘုရားဖူးသှားမယျဆိုရငျ မိဘပွညျသူတို့လညျး မိမိကိုယျပိုငျရှတှေကေို ဥပဒမေသိလို့ သတျမှတျပမာဏထကျ ရိုးရိုးသားသားပိုဝတျမိတာဖွဈစေ…ဘုရားဖူး ခရီးသှားကုမ်ပဏီတှကေ အပျေါမှာပွောခဲ့သလို ဈေးလြှော့ပေးပွီး ရှတှေဝေတျခိုငျးတာကို မသိလို့ ဝတျပေးလိုကျတာဖွဈစေ မလုပျမိကွဖို့ သတိထားကွဖို့ အသိပေးလိုပါတယျနျော…
ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ ဆရာဝန် အင်ဂျင်နီယာများစွာကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ
နာမည်ကြီးနေတဲ့ အကဆရာမလေးရဲ့ ကဗျာလွတ်အက
ငါးနှပ်စားသူများသတိထားကြပါ.မော်လမြိုင် ငါးဒိုင်တွင် ငါးနှပ်များ ဖော်မလင်းအသုံးပြုကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိ